Kpọtụrụ Anyị | Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Kpọtụrụ Anyị
Kpọtụrụ Foundationgwọ Ọrụ --gwọ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na Intaneti iji chọpụta ihe anyị na-eme banyere mmekọahụ na mmekọrịta mmekọrịta.
Collegelọ akwụkwọ Royal nke General Practitioners kwadoro anyị ịgba ọsọ ulo oru nkuzi nke otu ụbọchị na mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na ahụike na ahụike. Kpọtụrụ anyị maka nkọwa nke ihe omume na-emeghe na ọzụzụ ụlọ. Onodi a kwesiri onye obula nke nwere mmasi na ihe nlere. Anyị ka malitere usoro ihe mmụta maka ndị nkuzi ma na-ekwukwa okwu n'ụlọ akwụkwọ. Ọrụ ebere ahụ na ndị nne na nna na-enwe nnọkọ iji nyere ha aka kwadebe ha inwe mkparịta ụka ahụ siri ike banyere ihe egwu ndị gba ọtọ na ụmụ ha.
Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ,
Ụlọ ahụ na-ekpo ọkụ,
Ekwentị: + 44 (0) 7506 475 204
Aha gị (* achọrọ)
Email gị (* achọrọ)
Òtù Na-ahụ Maka Ọrụ Edemede na Scottish SC044948 [/ x_text]